Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguValerio
Indlu enkulu yaseBelvedere yinxalenye yeVilla Il Granduca, eseCarmignano, iikhilomitha ezingama-24 ukusuka eFlorence. Yindlu enkulu yaseTuscan, ejikelezwe yipaki yayo enkulu, ilawula isixeko ezinyaweni zayo. Ukusuka kwiinduli ze-Medici eziluhlaza unokunandipha umbono othakazelisayo, iFlorence ayikho kude, ngoko ke phakathi kwezibane ezininzi zedolophu unokubona ubuhle banaphakade beDome yaseBrunelleschi. Ubukhazikhazi, ubumfihlo kunye nendawo ekhethekileyo kunye nesondeleneyo kokusingqongileyo kuya kwenza ukuba ukuhlala kwakho kungalibaleki.
I-mansion ikhula kumanqanaba amabini: kwinqanaba lokuqala kukho igumbi lokuhlala kunye nekhitshi, kwinqanaba lesibini kukho igumbi lokulala eliphindwe kabini elinombono ophefumulayo eFlorence kunye negumbi lokuhlambela.
ICarmignano ikwintliziyo yeTuscany, intywiliselwe kwisilivere yemithi yomnquma, ukuphosa ilitye ukusuka kwezona zixeko zibalulekileyo zobugcisa: kulula kakhulu ukuhlala kwaye ufikelele ePistoia, ePrato, eFlorence (kodwa neMontecatini, Lucca, Siena okanye iVolterra). ), ekwakulungele kakhulu ukuqala kwezo zixeko kwaye uyenze indawo yokuya kuhambo oluphuma edolophini ngexesha lokufumana umtsalane welali yaseTuscan kunye neenduli., ngaphaya kwesikhundla esikhethekileyo, eneneni ngumasipala omncinci - owandisiweyo Iikhilomitha ezingama-39 kodwa ezihlala abantu abalishumi elinambini lamawaka-ezineelali ezininzi ezisemgangathweni woluntu zintywiliselwe emaphandleni kunye nesinye kwisithathu sigqunywe ngamaplanga. Inokutyelelwa ngeendawo zayo zase-Etruscan, iivillas zeRenaissance ezihombisa indawo yayo okanye inqaba yamaxesha aphakathi esalawula ikomkhulu ukusuka phezulu, kwiMyuziyam yasePark "Quinto Martini", iwayini ebalaseleyo, ioyile kunye namakhiwane omisiweyo, kuhlaza kunye amaplanga ahombisayo okanye amagqabantshintshi amangalisayo nacebisayo anokulawulwa kukujongwa kwakho. "... I-landscape enomthunzi ngamabele e-turgid ...": ngoko kubonakala ngathi i-Etruscan yakudala egama linguTunia yacula phezulu kwimiphunga yakhe. Kodwa neecawe zayo zamandulo kunye nee-abbeys, ezinobuncwane babo obuncinci kunye nobukhulu kwaye ngamanye amaxesha iqonga leekonsathi, inokuba ngomnye umtsalane kunye ne-archaeological kunye nomdiliya kunye neemyuziyam zewayini.
Umbuki zindwendwe ngu- Valerio
Sinqwenela ukuba undwendwe lwethu lube namava eholide yakhe hayi njengomkhenkethi kodwa njengomhlali wethutyana kwivilla. Injongo yethu kukunika iindwendwe zethu amava okhenketho olucothayo.